Yaa magacaabaya guddiga xalka kama dambeysta ah ka gaaraya arrinta Gedo? - Caasimada Online
Home Warar Yaa magacaabaya guddiga xalka kama dambeysta ah ka gaaraya arrinta Gedo?
Yaa magacaabaya guddiga xalka kama dambeysta ah ka gaaraya arrinta Gedo?
Muqdisho (Caasimada Online) – Shirka doorashada ee ka socda magaalada Muqdisho ayaa waxaa heshiis looga gaaray qoddobadii ugu adkaa ee horyaalay madaxda shirsan, gaar ahaan xiisada Gedo oo markii hore si gaar ah uga dhaxeysay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland.
Sida ay ogaatay Caasimada Online, ra’iisal wasaare Rooble iyo madaxweyne Axmed Madoobe ayaa guddiyo gaar ah u xil saari doona si ay arrintaas oo muddo jiitameysay xal kama dambeysa ah uga gaaraan.
Waxaa xusid mudan in booska madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saxiix ku lahaa heshiisyadii hore lagu badalay ra’iisal wasaare Rooble oo asagu la wareegay arrimaha doorashooyinka iyo amniga.
Heshiiska lagu wado inay qalinka ku duugaan Rooble iyo saxiixayaasha kale ayaa soo af-meeraya is-mari-waa qaatay muddo badan, kaasi oo jawhareer siyaasadeed iyo mid amniba geliyay dalka.